Ogaden News Agency (ONA) – VOA Laanta Axmaariga oo Waraysatay Gaashaanle Sare Cali Samire Sigad(Video:Hoos ka Daawo)
VOA Laanta Axmaariga oo Waraysatay Gaashaanle Sare Cali Samire Sigad(Video:Hoos ka Daawo)
Posted by ONA Admin	/ December 26, 2016
Waxaa laga waraystay Laanta afka Xabashiga ee idaacada VOA-da Gashaanle Sare Cali Samire Sigad oo ka warbixiyay meelo badan oo xasaasi ah kuna saabsan xaalada Shacabka Soomaalida Ogadenya. Gaashaanle Sare Cali Samire Sigad ayaa u sheegay VOA-da in uu u adkaysan waayay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo Shacabka Soomaalida Ogaadenya.
G. Sare Cali waxa u waraysigani ku bilaaabay in u warbixin yar o kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkiisii u ka sheekeeyo kadibna waxaa bilaabmay wayasigii.
G. Sare Cali Samire Sigad oo mudo dheer kasoo shaqeeyay magaalada Diridhabo iyo meelo kale oo wadanka kamid ah isagoo xilal kala duwan kasoo qabtay Booliska Federaalka Gumaysiga Itoobiya sida Hogaaminta Hay’ada Dambi-Baadhista & Taliyaha Saldhiga Booliska ee Magaalada Dirdhabo.
Waraysiga oo aad u dheeraa ayuu G. Sare Cali Samire Sigad kaga warbixiyay arimo badan oo kusaabsan tacadiya aan kala joogsiga lahayn ee kadhaca Ogadenya kuwaas oo u suurto gasahay in u soo maro goobiihii ay ka dhaceen. Dhibaatooyinkan uu Mudane Cali Samire Sigad uu sheegay ayaa iskugu jira Dil Badheedh ah oo u dadka la dilay ku qiyaasy 7,00000, Jidh-Dil, Xadhig, Kufsi, Baro-kac oo u dadka ka qaxay Ogadenya u ku qiyasay 8,00000 iyo kuwo kale oo ka dhan ah Xuquuqul Insaanka. Waxa uu sheegay oo kale in uu u adkaysan waayay dhibaatooyinka noocaas ah ee lagu hayo shacabka Soomaalida Ogadenya.
Waxa u G. Sare Cali sheegay waraysigiisa intaas ku daray in xasuuqa hadda ka socda gobolada Axmaarada iyo Oromada ay ka socdeen Ogadenya 25kii sano ee ay xukunka wadanka haystay ururka TPLF, xasuuquna waxa u ugu daraa intii u dagaalkii Cobale dhacay ka dib.
Gaanshaanle Sare Cali Samire Sigad oo waraysiyo dhawr ah horaan siiyay Saxaafada Ogadenya gaar ahaan Ilays TV iyo Radio Xorriyo ayaa sheegay in uu isaga laftigiisu dhibaatooyin kala duwan ay kasoo gaadheen xad-gudubyada aan kala joogsiga lahayn ee lagu hayo shacabka Soomaalida Ogadenya isagoo mudo sanad ah dambi la’aan u xidhnaa Gumaysiga Itoobiya.
Waxaa kaloo uu Mudane Cali Samire shaaca ka qaaday in taliska TPLF ay qayb ka yihiin colaadaha iyo dhibaatooyinka u dhexeeya shacabka Soomaalida Ogadenya iyo Qawmiyadaha ay dariska yihiin sida Canfarta, iyo Oromada. Taliska Woyaanaha oo adeegsanaya wakiilada u qaabilsan xasuuqa iyo gumaadka shacabka Soomaalida Ogadenya ayaa gabood-fallo badan ka fuliyay wadanka Ogadenya.
Sidoo kale wuxuu ka warbixiyay Mudane Cali Samiye in uu wax badan ka ogaa dhacdooyin kala duwan oo ciidanka Woyaanuhu ay xasuuq ka fuliyeen deegaamo badan oo Ogadenya kamid ah sida Baabili, Shiniile, Wardheer, Mooyaha, Malqaqa, Qabridahare, Gunagada iyo Qabri-Jeeraar. Waxa uu intaas raaciyay in sababta ay TPLF u xasuuqayso shacabka Soomaalida Ogadenya ay tahay in la boobo khayraadka dabiiciga ah ee Ogadenya iyadoon shacabkii lahaa lagala tashanin.
Dhinaca kale Gaanshaanle Sare Cali Samire ayaa walaac ka muujiyay in waraysiyada uu saxaafada la wadaay awgood ay halis ugu jiraan qoyskiisa iyo xigtadiisa sidii ku dhacday oo kale muwaadiniin u dhashay Soomaalida Ogadenya oo ku nool dalka Australia oo xigtadoodii Ogadenya lagu dhibaateeyay. Waxaa kaloo uu xusay Mudane Cali Samire in Jeel-Ogaden uu yahay meel cadaab iyo ciqaab badan oo shacab aad u tiro badan ay ku xidhan yihiin sabab la’aan.
Waxa uu intaas raaciyay in Ciidanka Woyaanuhu uusan shacabka Soomaalida Ogadenya oo kaliya xasuuqin ee xoolahoodiina ay laayeen sida Geela. Woyaanaha ayaa shacabka Soomaalida Ogadenya ku eedeeya inay taageero buuxda u hayaan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) taasoo oo ay sabab la’aan u dhibaataynayaan shacab aan waxba galabsanin oo masaakiin ah.
Ugu danbayntii waxa u G. Sare Cali sheegay in u maamulka Kililku dilay Ingineer Faysal Muxumed (Cagjar) oo ah nin da’ yar oo aqoonyahan ah, kaas oo loo dilay in u walaalkii wax kasoo hor jeeda maamul ku sheega Kililka qoray , waxa kale oo intaas raaciyay in dad aan waxba galabsanin loo xidhxidhay in dad ay qaraabo yihiin ay ka qayb qaateen mudaharaad ka dhacay wadanka Austalia bishii June ee sanadkan.
Laanta afka Axmaariga ee Cidaacada VOA-da ayaa isku dayday in ay waraystaan Cabdi Iley iyo Cabdixakiin Cigaal manaysan u suurtoobin, waxayse heleen taliyaha Booliska Ferderalka ee magaalada Diridhabo, isna markii u ogaaday meesha laga soo wacayo in ay VOA-da tahay ayuu telefoonka ku damiyay.
Hoos ka dhagayso waraysigii ay la yeelatay Idaacada VOA qaybteeda Axmaariga Gaanshaanle Sare Cali Samire Sigad.